AFRICOM iyo Midowga Afrika oo kawada hadlay arimaha Soomaaliya. • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / AFRICOM iyo Midowga Afrika oo kawada hadlay arimaha Soomaaliya.
AFRICOM iyo Midowga Afrika oo kawada hadlay arimaha Soomaaliya.
February 10, 2010 - By: Abdirahman. A
Taliska Ciidanka Milateriga ee qaaradda Afrika ee loo yaqaano AFRICOM iyo Ururka Midowga Afrika ayaa waxaa ay kawada hadleen xaaladda iminka ka taagan dalka Soomaaliya.
Madaxa Saldhiga Milateriga Ciidanka Maraykanka ee Qaaradda Afrika Jenraal William Ward iyo Madaxa Amaanka iyo nabadgalyadda ee Ururka Midowga Afrika Mr.Ramtanee Lamamra ayaa ku kulmay magaaladda Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya ahna xarunta Ururka Midowga Afrika.
Labadaas masuul ayaa waxaa ay si qoto dheer uga wada hadleen howlgaladda ay Ciidanka AMISOM ee hoos tega Midowga Afrika ay ka wadaan dalka Soomaaliya iyo xaaladda ay ku sugantahay DFKM ah oo cadaadis ay ku hayaan Xoogaga Mucaaradka ee kasoo horjeeda.
Jenraal William Ward oo intaa ka dib Saxaafadda la hadlay ayaa sheegay in AFRICOM ay ka go’aan tahay in ay kaalmo dhan weliba siiso DFKM ah oo ay aqoonsantahay Qaramada Midoobay iyo dardar gelinta howlaha nabad ilaalineed ay wadaan Ciidanka AMISOM.
Wuxuuna sidoo kale sheegay in ay gacan siinayaan Cidkasta oo isu taagta in ay wax ka qabato xaaladda ka taagan dalka Soomaaliya.
Jenraal Ward ayaa shaaciyey in Dowladda Maraykanka ay sii wadayso taageeradda ay siiso DFKM ah iyo Shacabka Soomaaliyeed.
Ururka Midowga Afrika ayaa hore wacad ku maray in uu si weyn wax uga qaban doono xaaladda iminka ka jirta gudaha dalka Soomaaliya.